Amai Mtetwa Vanokurudzira Zacc Kuti Iferefete Huori Hwakapumhwa VaTagwirei neGwaro reThe Sentry
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Amai Beatrice Mtetwa, vaudza zviri pamutemo Zimbabwe Anti-Corruption Commission, Zacc, vachiti inofanirwa kuongorora zvakaburitswa mugwaro reThe Sentry, iro rakaburitsa huori hunonzi huri kuitwa nechipangamazano chemutungamiri wenyika, uye ari wehukama naVaEmmerson Mnangagwa, VaKudakwashe Tagwirei
Mutsamba yavo kuZacc, Amai Mtetwa, vanoti gwaro reThe Sentry, iro rave nenguva richiburitswa mumapenhau nemadandemutande, rine nyaya dzekuti panogona kunge pachiitwa huwori, kusabhadhara mitero, kutyorwa kwemitemo yenyika, kubiwa kwemari nechimwe chikiribidi pamabhizimisi aVaTagwirei.
Amai Mtetwa idzi inyaya dzinokodzera kuongororwa zvakadzama neZacc.
Amai Mtetwa vaendesa gwaro iri kuZacc vachiti ingona kunge isina kuriona uye vatiwo sezvo komisheni iyi, iyo inopihwa simba nebumbiro remitemo kuongorora huwori, inofanira kutuma mukuru wemapurisa, Commissioner-General of Police, kuti vaongorore huwori hunotyisa hunonzi hwakaitwa nemakambani aVaTagwirei mugwaro reThe Sentry.
Amai Mtetwa vati havasi kuzoenda kumapurisa, paramende kana sangano ripi zvaro pamusoro penyaya iyi vachiti Zacc ndiyo ine simba rekuongorora nyaya dzakadai.
Mutauriri weZacc, VaJohn Makamure, vati kana Amai Mtetwa vanyorera kuZaac, vachaongorora gwaro ravo vachitivedza bumbiro remitemo yenyika.
Zacc ikomisheni yakaumbwa nebumbiro remitemo yenyika uye mamwe mabasa ekomisheni iyi ayinopihwa pasi peSection 255 yebumbiro anosanganisira kudzivirira huwori, chitsotsi, kusashandiswa zvakanaka kwemari muhurumende, makambani ayo kana makamabani akazvimirira.
Rimwe basa eZacc kutambira zvichemo kubva kune veruzhinji nekutora matanho anokodzera pamwe nekutuma mapurisa kuti aongorore nyaya dzehuwori pamwe nekuendesa nyaya dzehuwori kumuchuchusi wehurumende kuti vanenge vachipomerwa huwori vaendeswe kumatare edzimhosva.
Gwaro reThe Sentry rinoti VaTagwirei, avo vane makambani anodarika makumi mana muno nekunze, vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende nemakambani ayo kusanganisira mahofisi emutungamiri wenyika zvisina kujeka.
Rinotiwo panogona kunge pari kutyorwa mutemo izvo zviri kuitika kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda.
VaTagwirei vanonzi vanopihwa basa nehurumende munyaya dzekurima, dzekutenga mafuta nekupihwa mikana yekutenga migodhi nemakambani zvisina kujeka.
The Sentry rinoti hurumende nesangano akaita seZacc anofanira kuongorora mabhizimi VaTagwirei.
Asi mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development, VaClaris Madhuku, vati havawoni izvi zvichiitika nekuti VaTagwirei vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende.
Vatiwo handi VaTagwirei chete vachiti pane vamwe vana muzvinabhizimisi vakaita saVaBilly Rautenbach avo vanoshandawo nehurumende nenzira dzisina kujeka.
Matsambambozha akaburitswa neThe Sentry anoratidza kuti VaMnangagwa nagavhuna webhanga guru renyika, VaJohn Mangudya, vanhu vanoziva zviri kuitwa naVaTagwirei.
Asi VaMangudya vakaudza Studio7 kuti havana zvavanoziva nezviri kuitwa naVaTagwirei.
VaMnangagwa havasati vabuda pachena vachipa divi ravo pane zviri kuitwa naVaTagwirei.